यिनै हुन् बानेश्वरका डिएसपी दुर्गाराज रेग्मी जस्ले ठुलो माछा ‘महरा’ लाइ समात्न बालुवाटारमा पसे ! - Hamro Abhiyan
यिनै हुन् बानेश्वरका डिएसपी दुर्गाराज रेग्मी जस्ले ठुलो माछा ‘महरा’ लाइ समात्न बालुवाटारमा पसे !
काठमाडौं – आरोपित निर्वतमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई प्रहरीले नि *यन्त्रणमा लिएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरका डिएसपी दुर्गाराज रेग्मीको नेतृत्वमा गएको टोलीले उनलाई प्र *क्राउ गरेको हो । जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट प *क्राउ गर्न अनुमति पाएसँगै महरालाई प्रहरीले आइतबार प *क्राउ गरेको हो। महरालाई सभामुखको सरकारी निवास बालुवाटारबाट प *क्राउ गरिएको हो।
बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट साँझ करीब ६ः३० बजे गएका प्रहरीले प *क्राउ गरी उनको निजी सवारीसाधनमा राखेर महानगरीय प्रहरी वृत्त, सिंहदरबारमा ल्याएका थिए । उक्त वृत्तमा समाचार सङ्कलनमा लागि साँझ पुगेका केही सञ्चारकर्मीलाई ‘सोमबार बिहान आउनु’ फर्काइएको थियो । वृत्त परिसर बाहिर उहाँका कार्यकर्ता वा शुभेच्छुक देखिएका थिएनन् ।
महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटीका अनुसार हाल महरालाई क *रणी प्रयासको मु *द्दामा थप अ *नुसन्धानका लागि अन्य आ *रोपीसरह हि *रासतमा राखिएको छ । मुलुकमा करणी, यौ न दु व्र्यव हार र महिला हिं साका घटना सार्वजनिक र का *रवाही हुने क्रम बढे पनि उपल्लो तहका राजनीतिक पदाधिकारी जोडिएको यो पहिलो घटना हो ।
यही असोज १२ गते काठमाडौँको शान्तिनगरस्थित ‘डि प्रेसन’ को औ षधि सेवा गर्दै आएकी संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिलाको निवासमा भएको भनिएको सो घटनामा पीडित महिलाले सार्वजनिकरूपमा परस्पर विवादित प्रतिक्रिया दिए पनि प्रहरीलाई कि *टानी जा *हेरी दिएकाले थप अनुसन्धानका लागि महरालाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको हो । ती महिलाको सार्वजनिक पहिलो भिडियोमा आफू महराबाट क *रणी भएको उल्लेख छ भने दोस्रो भिडियोमा महरासँग लामो पारिवारिक सम्बन्ध रहेको र बाबुसमान व्यक्तिबाट त्यस्तो घटनाको कल्पना गर्न नसकिने उल्लेख छ । आ *रोप सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सभामुख महराको सचिवालयले पी *डित भनिएकी महिलाको निवासमा त्यस दिन महरा नगएको र उक्त आ *रोप आधारहीन एवं ष *डयन्त्रपूर्ण भएको जिकिर गरेको थियो ।
दशैँ बिदाका क्रममा घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म अदालत बन्द रहने भएकाले घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहे पनि सुनुवाइ रोकिने हुँदा त्यसबीचमा महरा हिरासतमै रहनुपर्नेछ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको निधनमा शोक मनाउन सर्वाेच्च अदालतले यही असोज २७ गते मुलुकका सबै अदालतमा बिदा दिने निर्णय गरेकाले २८ गतेमात्र अदालत नियमित खुल्नेछ । अन्य घ *टनामा जस्तै यस घ *टनामा पनि प्रहरीले थप अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । उक्त प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अ *भियोगपत्र तयार गरी अदालतमा पेश गर्नेछ ।
यस प्रकारको घ *टनाको अध्ययनमा संलग्न अधिवक्ता स्वागत नेपालले पीडितले वक्तव्य वा बयान फेर्नु वा नफेर्नुले अ *नुसन्धानमा खास असर नपर्ने जनाउँदै पी *डितको मानसिकता त्यही घटना दोहोरिरहने हुनाले ब *यान फेर्न सक्ने गरेका अन्य घटना पनि भएको र पी *डकलाई अदालतले कारवाही गराएका उदाहरण रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । तर उच्च तहका पदाधिकारी (हाइ प्रोफाइल) का व्यक्तिहरुले कतिपय यस्ता घ *टना छिपाएर राख्ने गरेको पनि अधिवक्त नेपालको भनाइ छ ।
घटनाबारे पक्ष विपक्षमा टीका टिप्पणी भएपछि यही असोज १४ गतेको सम्पन्न सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले महरालाई प्रतिनिधिसभाको सभामुख र सांसद पदबाट राजनीमा दिई अनुसन्धानलाई सघाउन आग्रह गरेको थियो । महराले असोज १५ गते आ *रोपबारे सत्यतथ्य, निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनी सभामुख पदबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । सोही दिन उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेको आदेशमा संसद् सचिवालयले सूचना टाँस गरी राजीनामा बारे जानकारी दिएको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को २११ अनुसार त्यसरी राजीनामा दिएको सूचना टाँस गरेपछि पद रिक्त भएको मानिनेछ । उहाँले सांसद पदबाट भने राजीनामा दिनुभएको थिएन । प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेमा सांसद पद निलम्बित हुनेछ ।
क *रणीको प्रयासमा तीन वर्ष कै *द ३० हजार जरिवाना
महरालाई मु *द्दा दायर भएका अधिकतम तीन वर्षसम्म कै *द हुने देखिन्छ। मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २२४ अनुसार उनीमाथि यस्तो सजाय हुने छ। मुलुकी संहिताको धारा २२४मा यौ *न दु *व्र्यवहार गर्न नहुने उल्लेख छ। उक्त दफाको उपदफा २ मा ‘कसैले आफ्नो पति वा पत्नी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई निजको मञ्जुरी विना क *रणी आशयले समातेमा वा निजको सं *वेदनशील अ *ङ्ग छोेएमा वा छुन प्रयास गरेमा, निजको भि *त्री पोशाक खोलेमा वा खोल्ने प्रयास गरेमा, निजले लगाउने भित्री पोशाक लगाउन वा फुकाल्न कुनै किसिमले बाधा अवरोध गरेमा वा निजलाई अस्वाभाविक रुपमा कुनै एकान्त ठाउँमा लगेमा, यौ न सम्बन्धी आफ्नो अङ्ग निजलाई छुुन, समाउन लगाएमा, निजसँग अ श्लिल वा अन्य त्यस्तै प्रकारको शब्द मौखिक, लिखित वा साङ्केतिक रुपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रयोग गरेमा, अ श्लिल चित्र वा तस्वीर देखाएमा, यौ नका आशयले जिस्क्याएमा वा हैरानी दिएमा वा निजसँग अ *स्वाभाविक, अ *वाञ्चित वा अ *मर्या्दित व्यवहार गरेमा निजले यौ न दु व्र्य वहा र गरेको मानिने ’ उल्लेख छ । उक्त कार्य गर्नेलाई सजाय तीन वर्ष कैद र तीस हजार जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
करणी गरेको ठहर भएमा ११ वर्ष कैद
महराले आफूलाई गरेको ब *यान रोशनीले दिइन भने महरामाथिको मुद्दामा थप सजाय हुने छ । किटानी जाहेरीकर्ता रोशनीले आफूमाथि करणी नै गरेको भनेर र आवश्यक प्रमाणवाट पुष्टि भएपछि सरकारी बकिले जिकीर लिएका महरामाथि मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दुई वटा दफा आर्कषित हुने देखिन्छ । संहिताको २१९ ले करणी र २२२ ले विशिष्ट पदमा रहेको र आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत भएकाले थप सजाय हुने कुरा गर्दछ ।
महरामाथी शाहीले पहिलाे दिन आफुमाथि कु टपी ट गरेकाे आराेप समेत लगाएकी थिइन् । बयानका क्रममा उनले कु टपी ट गरेकाे भनिन भने महरामाथी थप अर्काे अभियाेग पनि लाग्ने छ । मुलुकी अपराध संहिताकाे परिच्छेद १४ काे आराेपमा महरामाथि अ *नुसन्धान हुने छ । कु टपी ट र अ ङग भ ङ्ग बनाएकाे आराेपमा उनीमाथि थप सजाय हुने छ । कु टपी टकाे अभियाेगमा पीडितमाथि पुगेकाे क्षतिकाे आधारमा सजाय निर्धारण हुने छ ।
को’रोना भा’इरसका रो’गीहरुलाई निको बनाएपछि खुशीले नाचे डाक्टर…